Rose of Sharon: ဗီယက်နမ်မှာ(၄)
Posted by rose of sharon at 8:42 PM
စူးနွယ်လေး October 13, 2009 at 10:56 PM
တို့တော့ ဗမာလို့ပြောရတာကို သိမ်ငယ်တာတွေ ဘာတွေ မတွေးမိဘူး Rose ရယ်။ မသိတဲ့လူတွေကိုတောင် မြန်မာပြည်နေရာကို သေချာရှင်းပြလိုက်သေးတာ။ သိတဲ့သူတွေက ဗမာပြည်အခြေအနေ မေးရင်လည်း ရှင်းပြတာပဲ။ စရောက်ကာစတော့ ဗမာဆိုရင်အသေအလဲ တွေ့ချင်တာ။ သံရုံးကိုတောင် ဖုန်းဆက်ပြီး ဗမာသူငယ်ချင်းလိုချင်လို့ သိရင်ပြောပါဆိုပြီး မေးသေးတာ။ စတွေ့ကတည်းက ခုထိခင်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။ တချို့ကြတော့လည်း စရိုက်မတူတော့ ပေါင်းလို့မရဘူး။ သိပ်တွဲလွန်းပြန်ရင်လည်း တယောက်နဲ့တယောက် ပြဿနာဖြစ်တာတွေ ရှိလာ၊ ကြားလာတော့ နောက်ထပ် ဗမာသူငယ်ချင်း မရှာတော့ဘူး။ ကိုယ်တွေ့အရ ကြာကြာတခါတွေ့တာ ပိုကောင်းသလိုပဲ။ လူမျိုးခြားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွဲတာလည်း တခါတလေ ပိုအဆင်ပြေတယ်။ သူတို့က မိန်းမသိပ်မဆန်ဘူး။ ထားပါတော့ ဒါက တို့အကြောင်းပါ။
အော် မုန့်ဖုတ်တာတော်တယ်ဆိုလို့ ပြောရဦးမယ်။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး လွယ်မယ်ထင်တာလေးတွေ လက်တည့်စမ်းတာပါ။ မအောင်မြင်လို့ ပစ်လိုက်ရတာတွေလည်း အများကြီးပဲ။ တချို့ကြတော့လည်း ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ နာမည်သိပါရဲ့ ကိုယ်ကမမြင်ဖူးတော့ ဆိုင်ကလူကို ရှာပေးဖို့ အကူအညီတောင်းရသေး။ အောင်မြင်သွားတော့လည်း ပျော်တာပေါ့။
kiki October 13, 2009 at 11:10 PM
သမီးလေးက တကယ့်ချစ်စရာလေးနော် ...အာဘွား ပေးသွားတယ် .. ။
နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့မြန်မာတချို့ ...အင်းလေ ... မရို့ စ်ပြောသလိုပဲ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။။။
ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံမျိုးတောင် Killing Field ထဲကနေ ရုန်းထွက်ပြီး တိုးတက်လာနိုင်ခဲ့ သေးတာပဲ .. နှစ်တိုတို လေးအတွင်း ကောင်းတဲ့ဖက်ကို ပြောင်းလဲ လာနိူင်ခဲ့ သေးတာပဲ ။။
ဒါတွေကို အတုယူသင့်တယ် ။ ခေါင်းရှောင်တွေ မဟုတ်ပဲ တကယ်တော်တဲ့မှန်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ ရွှေပြည်ကြီးမှာ နေရာရရင် ကောင်းမှာပဲ လို့စိတ်ကူးယဉ်မိသွားတယ် ..ဟီးဟီးး
စူးနွယ်လေး October 13, 2009 at 11:22 PM
ဝက်ဝံလေး October 14, 2009 at 1:02 AM
အော် နားလည်ပေးလိုက်ပါ တီတီရို့စ်ရယ်နော် ရှိမှာပေါ့လေ ညီမတို့ကတော့ ကိုယ်ဟာ မြန်မာပဲလို့ အမြဲတော့ပြောမှာပါ စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေ နောက် ဆက်ဦးနော်
သမီးလေးးက ချစ်စရာလေးဆိုတော့ ချီချင်ကြတာ မဆန်းပါဘူးလေ ဟိဟိ ညီမလဲ တွေ့ရင် ချီချင်မလားပဲ ဟက်
လသာည October 14, 2009 at 1:45 AM
ဟုတ်တယ် သမီးလေးက တအားချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ အနားနီးရင် တို့တော့ နေတိုင်းရောက်မှာ သေချာတယ်။
တို့လည်း ရို့စ်လိုပဲ သမီးလေးအတွက် အရူးအမှုး စိတ်ပူခဲ့ရတယ်။ တချိန်တိုင်း ကိုယ်ပူလား နေကောင်းလားပဲ စမ်းပြီး ဆေးခန်းသွားဖို့ကို အမြဲ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်ခဲ့တာ..။ အခုလည်း ကိုယ်နဲ့ ဝေးတဲ့တစ်နေရာမှာဆိုတော့ စိတ်ပူတာက နေတိုင်းလိုလိုပဲ..။
ရို့စ်ကို ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ သမီးကိုလည်း လွမ်းသွားတယ် :'(
Anonymous October 14, 2009 at 2:44 AM
သမီလည်း ချော မေမေကြီးလည်းချော လက်ကြီးပိုက်နေတဲ့ သားလေးကလည်း ခန့် ခန့် ကြီးနော်။ ကြီးလာရင် အကြီးအကဲ ဖြစ်မဲ့ပုံ နာခံမဲ့ပုံ ကြိုးစားမဲ့ပုံ လိမ်မာမဲ့ပုံလေး။ မအယ်ပြောရင် မှားခဲတယ်။
လူတိုင်းမှာ သူ့ အကြောင်းနဲ့ သူရှိကြပါတယ် ရိုစ်ရေ။ မြန်မာလို့ ပြောရမှာကို ဘာလို့ မပြောချင်ကြတယ် မသိပါဘူး။
ဘန်ကောက်မှာတော့ ဗမာဆိုရင် အလုပ်မရတတ်လို့ရှမ်းတွေ က ရှမ်း တရုပ်တွေက တရုပ် အိန္ဒိယလူမျိုးတွေက india က လာတယ် ပြောကြတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။
ဗမာ အလုပ်သမားတယောက်က နာမည်ကြီးမင်းသမီးရဲ့ ပစ္စည်း ခိုးတာရယ် ရှေးဟောင်းဘုရားတွေ ခိုးတာရယ် နဲ့ ဖမ်းခံရကတည်းကတဲ့ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကပါ။ ခုတော့ မသိပါဘူး။ ဗမာဆိုရင် တအားနှိမ်လို့ pass port တွေကပါ မြန်မာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အတုတွေနဲ့ နေကြတာတဲ့လေ။ အဲ့တော့ အချင်းချင်း မတွေ့ ရဲတာရှိတယ်။ လူကြားထဲ ဗမာစကားမပြောရဲဘူးတဲ့။ ပတ်စ်ကြည့်လိုက်ရင် ဗမာ မဟုတ်။ ပြောနေတာက ဗမာစကား။ ယိုဒယားရဲတွေက တချို့ ဗမာလိုတတ်တယ်တဲ့။ တတ်တယ် မပြောပဲ ခပ်တည်တည် နေကြသတဲ့။ ကိုယ်က ရဲရှေ့ ဗမာလိုပြောမိရင် အတုသမားဆို ကျားရှေ့ လဲတာပဲတဲ့။
ဗမာလို မပြောနဲ့ ဗမာတွေအိမ် မသွားနဲ့ ဆိုတဲ့ သူတွေ တွေ့ ဖူးပါတယ်။ သူ့ အကြောင်းနဲ့ သူပေါ့လေ။
Anonymous October 14, 2009 at 3:25 AM
မရေ...ဗီယက်နမ် ၄ လာဖတ်တယ်သိလား
Angel Shaper October 14, 2009 at 5:02 AM
မရှာရွန်းရေ.... ချစ်စရာသမီးငယ်လေးကို အာဘွားးးးးးးးးးးးးးးး
ပြီးတော့ ဖတ်တယ်။အဲဒါမျိုးတွေ နားလည်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်လို့။
amk October 14, 2009 at 6:06 AM
အမပြောတဲ့ သမီးလေးကိုကြည်းပေးတဲ့ ဆရာဝန်မလေးနဲ့အန်တီkiki ပြောပြတဲ့ဆရာဝံမကျီး ကွာပနော်
sonata-cantata October 14, 2009 at 7:34 AM
အကြောင်းအရာတိုင်းမှာသူ့ reason နဲ့သူတော့ရှိကြတာဘဲလေ.....
အဲ့ဒါလေး သဘောကျတယ် Rose ရေ ... ဒီမှာလည်း လောလောဆယ် ခံစားနေရလို့ ...
Anonymous October 14, 2009 at 7:41 AM
ဗမာတွေ.. ကိုယ့်အိတ်ကိုယ်စိုက်ပီး လုပ်ခဲ့သေးတယ်..
အခုတော့.. အတော်လေး လက်လန်သွားပီ..။ ဗမာဆို... .
အဝေးက သူတွေကိုပဲ အပေါင်းအသင်းလုပ် သီးသီးသန့်သန့်နေ ..အကြာကြီးနေမှ တခါဆုံတော့တယ်.
နောက် တခု ကိုယ့်အချင်းချင်းဖေးမ ကူညီမယ် စိတ်ကူးမရှိဘူး နှိမ်ချင်ကြတယ်။
ကိုယ့် အကြောင်းကိုယ်သာသိတယ်။ ကိုယ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲကိုယ်ပဲသိတယ်။ အထင်နဲ့မှန်းပီး ကိုယ့်ကို အထင်သေးတဲ့သူတွေကလဲ ရှိသေး.. ခုချိန်ထိ တော့ ကိုယ့်ဦးတည်ချက်အတိုင်း ရှင်သန်နေတာပဲ
ကိုယ့်ကို ထောက်ခံသူတွေက မြန်မာကလွဲလို့ တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေ အကုန်ရှိနေသ၍ .. ကိုယ်နဲ့ ပက်သက်ခဲ့တဲ့
မြန်မာတွေရဲ့ အကူအညီကို ခုချိန်ထိ တခါမှ လဲ မရခဲ့သလို ယူမှာလဲမဟုတ်ဘူး လိုအပ်တဲ့ သူကို ကူညီပေးချင်ပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို မကြိုက်လို့ ခုတော့ ခပ်ခွါခွါပဲ ကိစ္စရှိမှပဲ ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်။
မြန်မာပြည်ကလာတာ မြန်မာပြည်အကြောင်း မြန်မာလူမျိုးအကြောင်း ကိုနိုင်ငံခြားသားတွေ ရှေ့မှာ အမြဲပြောတယ်။ ဂုဏ်ငယ်စရာမှမလိုတာ
ကိုယ့်အမှုအရာ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်က ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်လူမျိုးဆိုတာထက် ပိုအရေးကြီးတာပါ။
နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတွေကိုတော့ တကယ်ပဲ လက်ကုန်တယ်။
zaw October 14, 2009 at 9:44 AM
ဒီမြန်မာတွေနဲ့ တယ်ခက်နေကြတာကိုးဗျ ... ဗီယက်နမ်လို နိုင်ငံမျိုး ရောက်နေတာတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် မြန်မာလို့ ထင်မြင်မိမှာ စိုးရိမ်နေကြတယ် ဒီလို စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကို ဘယ်လို တည်ဆောင်ကြမလဲဗျ ... ဒါတွေအားလုံးဟာ ဒီစစ်တပ်ကနေ ဖန်တီးပေးလိုက်တာပဲဗျ .. ကျနော်ကတော့ ဒီကောင်တွေကိုပဲ အပြစ်တင်မိတယ်ဗျာ
နှင်းဆီပန်းချစ်တဲ့ကောင်မလေး October 14, 2009 at 10:39 AM
တစ်ချို့မြန်မာတွေက နိုင်ငံခြားရောက်တာနဲ့ သွေးကြိးသွားကြတာလေ
သူတို့လဲ သူတို့အကြောင်းနဲ့ သူတို့ရှိလို့ ဖြစ်မှာပါ။
ရေတမာ October 14, 2009 at 1:15 PM
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ကောင်းသတင်းတွေကို ၀မ်းသာကြည်နှုးမိပါတယ်။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေတွေလို့လဲ မှတ်ယူမိတယ်။
မိုးခါး October 14, 2009 at 9:21 PM
ဒါလည်း ဘာရောဂါလည်း မသိဘူးနော် .. ?????
မြန်မာက မြန်မာပဲလို့ထင်တာပဲ အစ်မရယ်
မသိစေချင်ရင်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေပေးလိုက်ရုံပေါ့ ..း))
ပြည့်စုံ October 16, 2009 at 3:40 PM
အော်... ဟုတ်တယ် အမရေ....
ဒီမှာဆို ကျနော်တို့ကို ချိနော်( Chinese) လို့ခေါ်ကြတယ် မက္ကဆီကန်တွေ အမေရိကန်တွေက ကျနော်လည်း ငါတို့က ချိနော်မဟုတ်ဘူး ဗမာ Between India, China. သမိုင်းလေးပြောပြရတယ်... တချို့တွေက ကြည်နူးနေကြတယ်...။
Shinlay October 17, 2009 at 2:32 AM
Rose ရေ လာဖတ်သွားပါတယ်။
Thanks for your Info about Vietnam and Myanmar.
yangonthar October 18, 2009 at 2:57 PM
ဘယ်အရပ်ရောက်ရောက် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ပါးစပ်က ထုတ်ဖော် ဝန်မခံပေမယ့် ဗမာလူမျိုး မြန်မာပြည်သား တွေဆိုတာကိုတော့ မမေ့သင့်ကြပါဘူးကောင်း တဲ့သူ ဆိုးတဲ့သူဆိုတာတော့ နေ ရာတိုင်းမှာ ရှိမှာပါပဲ .... ခုထိတော့ မြန်မာလို့ ပြောရတာ အားမရှိပေမယ့် လေသံမာမာနဲ့ကျုပ်မြန်မာ လို့ ပြောနေတုန်း ပဲ အစ်မရေ ..... ဗဟုသုတအတွေ့ အကြုံလေး အတွက် ကျေးဇူး ညီမလေးက သိပ်ချစ်ဖို့ ကောင်းတော့ လူတွေ ကချီချင်တာပေါ့ .....
အစ်မရေ မရောက်တာကြာလို့ နေကောင်းတယ်နော်
ကိုလူထွေး October 21, 2009 at 1:09 AM
အိတ်စိုက်ပြီးချက်ကျွေးမယ်ဆို ခေါ်လိုက်လေ... လာခဲ့မယ်...
တကယ်လာလည်တော့မှ ဘယ်သူလဲ ကိုလူထွေး... မသိပါဘူး ဆိုပြီး ဗိယက်နမ်လို ပြန်မပြောရဘူးနော်...
Rita October 28, 2009 at 8:04 PM